Nzuzo Pip arụnyere ebe nchekwa Microsoft | Site na Linux
Daysbọchị ole na ole gara aga, e wepụtara akụkọ ahụ dị ka akụkụ nke mmelite na-adịbeghị anya na Rasberi OS, na Rọberị Pi Foundation arụnyere nchekwa Microsoft n’elu kọmpụta kọmpụta ọ bụla tụkwasịrị ya obi, n’amaghị ndị nwe ha.
Achọpụtaghị usoro ahụ n'ime obodo nke Linux na-arịgo elu imegide enweghị nghọta na telemetry na ndị ọrụ nke utu Pi na-ekwu okwu tinyere oku na ebe nchekwa Microsoft na utu Pi OS, gbakwunye mgbakwunye nke igodo Microsoft GPG maka ntinye ngwugwu a pụrụ ịdabere na ya.
Ihe ntinye Microsoft bu ihe agbakwunyere site na ngwugwu raspberrypi-sys-mods, nke gunyere usoro ihe eji eme ihe banyere sistemụ na ntọala.
Nhazi nke /etc/apt/sources.list.d gbanwere site na post-inst akwukwọ ma jiri ya hazie ebe mmepe VSCode. Ihe ndị e kwuru na-emetụta eziokwu ahụ bụ na agbakwunyere ebe nchekwa Microsoft na igodo na-enweghị ndị ọrụ ịdọ aka ná ntị.
Ebumnuche dị n’agbakwunye mgbakwunye Microsoft dabara adaba bụ ime ka ọ dị mfe iji gburugburu ebe mmepe Visual Studio Code.
Ọ bụ eze n'ihi na ha na-akwado Microsoft IDE (!), Mana ị ga-enweta ya ọbụlagodi na ị wụnye ya na onyonyo doro anya ma jiri Pi gị na-enweghị isi na-enweghị GUI. Nke a pụtara na oge ọ bụla ị mere "apt update" na Pi gị, ị na-agụ nkesa Microsoft.
Ha wunye Microsoft GPG igodo nke ejiri abanye akara site na ebe nchekwa. Nke a nwere ike ibute ọnọdụ ebe mmelite na-ewepụta ndabere site na nchekwa Microsoft na sistemụ ga-atụkwasị obi na ngwugwu ahụ na-akpaghị aka.
A na-eme ntinye ntinye ahụ na nzuzo, na-enweghị nkwenye ndị ọrụ, na Foundation Raspberry akwadebebeghị ndị ọrụ maka mgbanwe dị otú a site na ntinye akwụkwọ ntinye aka.
Ndị ọrụ iwe were na-ekwu na eOmume a dị ize ndụ maka ihe abụọ:
Nke mbu, mgbe obula a na - emelite ihe omuma ihe omuma mgbe ị na - etinye ma obu na - emelite ngwugwu, ihe ngwugwu na achoputa ebe nile ejikọrọ, ya bu, eIhe nkesa Microsoft na-achikota ozi banyere adreesị IP nke ndị ọrụ niile Sistemụ Pi ọrụ sistemụ, nke enwere ike iji mepụta profaịlụ onye ọrụ.
Enwere ike iji profaịlụ yiri ya, dịka ọmụmaatụ, maka mgbasa ozi ezubere iche mgbe ị na-abanye na ọrụ Microsoft site na otu IP.
Nke abuo, ejikọtara nchekwa Microsoft dị ka ntụkwasị obi zuru oke, n'agbanyeghị eziokwu na ọ bụghị n'okpuru njikwa nke ndị mmepe sistemụ Raspberry Pi na ndị ọrụ anaghị ajụ nkwenye iji tinye igodo Microsoft GPG. Ọ bụrụ na akụrụngwa nke Microsoft mebiri site na nchekwa dị otú ahụ, a ga-ekesa mmelite ụgha iji dochie nchịkọta ọkọlọtọ ma ọ bụ dochie ndị na-adabere na ya.
Ọ gara n'ihu na-ekwu na
Nke a bụ ụzọ ị si eme ihe oge niile "maka nsogbu yiri nke ahụ" na-agwaghị ndị nwe ahịrị kọmputa gị otu kọmputa. »Ndị ọrụ echetarala esemokwu dị n’etiti Linux na Microsoft n’elu telemetry.
N'ikpeazụ, a chọpụtara na nsogbu ahụ anaghị emetụta nkesa Raspbian nke ndị obodo na-akwado, a na-agbakwunye mgbanwe ahụ na Raspberry Pi OS, ụdị dị iche iche nke Raspbian nke Raspberry Pi Foundation guzobere.
Approachzọ ọzọ bụ igbochi Visual Studio Code ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu na-eji Raspberry Pi OS. Ejiri Usoro Ntanetị Visual nwere nhọrọ telemetry, yabụ ọtụtụ ndị ọrụ na-ele Visual Studio Codium anya ka ọ dịrị mma.
Iji wepu ohere nnweta na sava Microsoft na sistemụ Raspberry Pi, nanị kwuo ọdịnaya nke faịlụ /etc/apt/sources.list.d/vscode.list ma hichapụ igodo / wdg / apt / ntụkwasị obi. Gpg.d / microsoft .gpg.
Ọzọkwa, "127.0.0.1 packages.microsoft.com" nwere ike tinye na / wdg / ụsụụ ndị agha iji gbochie arịrịọ.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọ njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Nchịkọta Raspberry Pi Foundation zoro ezo na ebe nchekwa Microsoft
gPodder: Nchịkọta mgbasa ozi dị mfe na onye ahịa Podcast maka Linux